Kismaayo News » Nin hanti badan ka dhacay ganacsato Jubbaland oo Kenya lagu xirey + Caddeymo
Nin hanti badan ka dhacay ganacsato Jubbaland oo Kenya lagu xirey + Caddeymo
Kn: Nin u dhashay dalka Sudan oo la sheegey in uu wakiil u yahay mid ka mid ah amiirada boqortooyada Sucuudiga ayaa lagu hayaa dalka Kenya, waxaana lagu eedeynayaa in uu duufsado dhalinyarada si ay ugu biiraan ururka Daacish.
Ninkani oo lagu magacaabo Xasan Abuubakar Cusmaan ayaa waxa uu heystaa baasaboorka Soomaaliga ah oo uu ku shaqaysananayay muddo aad u dheer, waxaana la sheegey in uu Kenya ka heysto shatiyo ganacsi oo la xiriira Shidaalka iyo Beeraha.
Sida mar sii horeysey ay Wargeyska KismaayoNews u sheegeen ganacsato reer Jubbaland ah, ninkani ayaa dhac u geystey dad badan oo Soomaaliyeed oo ay iyaga ka mid yihiin, waxayna sheegeen in ay sharciga la tiigsanayaan.
Mid ka mid ah amiirada Sucuudiga oo lagu magacaabo Suldaan Binu Nasir ayuu u yahay wakiil ganacsi oo dhanka Afrika ah sida uu qorey wargeyska The Star ee Nairobi kasoo baxa.
Garyaqaan u doodaya ninkani oo lagu magacaabo Cliff Ombeta ayaa sheegey in aysan suurtogal ahayn in Xasan loo celiyo dalka Sudaan, wuxuuna sheegey in baasaboorka uu heysto uu yahay mid sax ah oo ay siisey dawladda Soomaaliya.
Dhul beereed ku yaala degmada Kalifi oo dhan 10 kun oo hiktar ayuu ninkani wakiil uga yahay Amiirka Sucuudiga, waana dhulka iyo mashruuca uu ku qayaanay Soomaali badan oo uu ka qaaday lacag maalgashi.
16 kii June , 2016 ayaa laga qabtay garoonka Jomo Kenyatta isaga oo baxsad ah sida ay Kn u xaqiijiyeen ganacsato reer Jubbaland oo hanti badan ku sheeganaysa. Dalalka kala ah Jabuuti, Itoobiya, Eritrea iyo Imaaraadka ayaa intuba ninkani dacwad looga heystaa oo laga doondoonayaa.
Baasaboorka uu wato ayaa nambarkiisa waxa uu yahay PP.N0=P00425245 , waxaadna arki kartaa waraaq ay u qortey safaaradda Soomaaliya ee Kenya oo ay ugu codsanayso fiiso ama dal ku gal sanadkii 2012-kii.
Ninkani ayaa waxa uu madax ka yahay shirkad lagu magacaabo Arafco Agriculture Company.
Bishii feberaayo ee sanadkani ayaa waxaa warqad qorey madaxii hore ee hoggaanka socdaalka Soomaaliya Jeneraal Gaafoow, taasi oo uu kaga digayo in ninkani uusan Soomaali ahayn, islamarkaasina baasaboorka uu wato uu yahay mid been abuur, warqaddana xaga hoose ayaad ka arki kartaan.
FG : Wargeyska KismaayoNews waxa uu hayaa waraaqo dheeraad ah oo la xiriira dacwaddii lagu furey ninkani iyo g’aamadii kasoo baxay maxkamadda kadib markii ay dacweeyeen ganacsatada reer Jubbaland. Markii ay munaasab noqotana waan soo daabici doonaa Insha allaah.